Angidimbin’ireo kandidà : Lalàna sa politika ? -
AccueilSongandinaAngidimbin’ireo kandidà : Lalàna sa politika ?
Hatreto , dia samy manana ny fanazavany mikasika ny lalàna mifehy ny fanidinana an’habakabaka eto Madagasikara ny primatiora sy ny ACM, na ny « Aviation Civile de Madagascar », izay mijery ny filaminan’ny fisidinana. Raha ny zava-nisy mantsy dia maro tamin’ ireo kandidà mampiasa angidimby, no tonga nitaraina teny amin’ny primatiora, noho ny tsy fahazoan’izy ireo ny alalana hampiasa io fitaovana io avy amin’ ny ACM. Omaly dia nitondra fanazavana ny teo anivon’ ny ACM, fa noho ny mbola tsy fahafenoan’ny antontan- taratasin’ ireo angidimby, hisidina eto Madagasikara no antony mbola tsy namoahana ny fahazon-dalana. Voalaza anatin’ izany ohatra ny fifanarahana vita sonia, nataon’ireo olona hampiasa ny fitaovana, ary tahaka izany ihany koa ny antontan-taratasy hafa, izay tokony hovitaina 2 volana alohan’ny fampiasana ny angidimby. Raha ny fanazavan’ny ACM, dia ny lalàna no arahin’ izy ireo, ka vantany feno ny antontan-taratasy dia homena ny fahazon-dalana. Ny orinasa antsoina hoe “Sky service” no nanofana ireo angidimby ireo, ka ny angidimby miisa 3 an’ity orinasa ity hatrizay teto Madagasikara dia efa misy mampiasa. Miisa 8 kosa ireo fangatahana mbola tsy nahazoana valiny, raha ny fanazavan’izy ireo ihany.
Manoloana ny fitarainan’ireo kandidà kosa, dia nisy ny antsoina hoe “requisition” nataon’ny primatiora tamin’ ny ACM. Mampilaza fa tokony homena ireo kandidà ny fahazon-dalana, hampiasa ireo angidimby ireo. Izany hoy ny primatiora dia ny mba hisian’ny fifandanjana amin’ ireo samy kandidà. Nohazavain’ ny primatiora anatin’ ity “requisition” ity ihany koa, fa efa nisy ny fifanarahana iraisam-pirenena nosoniavina anatin’ ny OACI tany Canada, mamela malakaka ny fisidinan’ny angidimby amin’ ireo firenena nanao sonia izany. Izany hoe eto aloha izany dia mifanenjana ny tady eo amin’ ny primatiora sy ny ACM, mikasika ity raharaha ity. Maro amin’ ireo mpanara-baovao rahateo no milaza fa tafiditra anatin’ny resaka politika izao zava-mitranga izao, satria misy ny kandidà tsy avela mampiasa ny fitaovana, tahaka ny angidimby, ahafahana mitety faritra. Mipetraka noho izany ny fanontaniana hoe mbola tokony anatin’ny kajikajy ihany isika amin’ izao fotoana izao, sa tokony halalaka ny kandidà amin’ny fampielezan-kevitra ataony. Ankoatra ny fanazavana entin’ny roa tonta ireo anefa, dia hita fa efa tonga eto Madagasikara ny angidimby ampiasain’ny kandidà Ravalomanana Marc.